April 2015 – အခါပေး ဗေဒင်
ယနေ့ခေတ်တွင် လူတော်တော်များများ ဗေဒင်ပညာကို စိတ်ဝင်စားလာကြ၏။ ကိုယ်တိုင် သင်ယူလ့လာ လိုကြ၏။ ကောင်းသော လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်၏။ ဗေဒင်ပညာသည် နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ဝင်ဆန့်၏။ ဆက်စပ်နေ၏။ ပညာရပ်အသီးသီးက ၄င်းတို့၏ပညာဖြင့် အနာဂတ်ကို ခန့်မှန်းကြ၏။ ဗေဒင်ပညာကလည်း … More
Ref: 4.4.2015 သစ်​ထူးလွင်​သတင်း “ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ဖို့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် လိုလားပုံ မရဘူးလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဝေဖန်” ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ဖို့ အစိုးရက ခွင့်မပြုဘူး ဆိုရင် နိုဝင်ဘာလမှာ … More
*၄-ဟူးအခါမှာ အလုပ်​အ​ကြောင်း​မေးရင်​… ဘုရားပွင့်​​တော်​မူတဲ့အခါဖြစ်​လို့ “​အောင်​မြင်​မယ်​” Q. ဘယ်​​လောက်​ကြာရင်​ ​အောင်​မြင်​မလဲ? A. တစ်​လခွဲကြာရင်​ ​အောင်​မြင်​မယ်​။ (၄၅ရက်​>ဘုရားဖြစ်​တာ ၄၅ဝါ) Q.ဘယ်​​လောက်​ကြာကြာခံမလဲ? A. ၄၅နှစ်​။ *၅-​တေးအခါမှာ အလုပ်​အ​ကြောင်းလာ​မေးရင်​… ပဋိသ​န္ဓေတည်​​နေလို့ … More